7 Lego Star Wars အပေါ်နှစ်ဆ VIP မှတ်ဂိုးသွင်းရန်သတ်မှတ်
12 / 07 / 2021 12 / 07 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 224 Views စာ0မှတ်ချက် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer, 75257 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75288 ကို AT-AT, ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina, 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ၇၅၃၀၈ R75308-D2, VIP အမှတ်နှစ်ချက်, Lego, LEGO Group, Lego Star Wars, LEGO.com, စျေးဝယ်, အဆိုပါ LEGO Group, VIP, vip အချက်များ, VIP ဆုများ, VIP ဆုပေးစင်တာ
တရားဝင်မှ ၀ ယ်ယူမှုများအားလုံးအတွက် VIP အမှတ်နှစ်ဆရရှိနိုင်သည် Lego အွန်လိုင်းစတိုး - သင်အကြိုက်ဆုံးအားလုံးအပါအ ၀ င် Lego Star Wars တည်ဆောက်။
Lego လာမည့် ၀ ယ်ယူမှုများမှငွေကိုထုတ်ယူရန်နှင့်သီးသန့်ထုတ်ကုန်အချို့ကိုထည့်ရန်ပင်ငွေထုတ်ရန် VIP ချေးငွေကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏သစ္စာရှိမှုအမှတ်များပိုက်ဆံအိတ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိသည် Lego Star Wars တစ်ချိန်တည်းမှာစုဆောင်းခြင်း။
7 - 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon
အချို့က၎င်းကို 'hunk of hunk' အဖြစ်မြင်ကြသော်လည်း၎င်းသည်အလိုရှိဆုံးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Lego Star Wars စျေးကွက်အပေါ်အစုံ။ နှင့်အတူ ကောလာဟလအစီအစဉ်များ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်တည်ဆောက်မှုကိုအနားယူရန်ဤအချက်သည်သင်နှစ်ဆရမှတ်ရရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon.
မော်ဒယ်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်စတော့ရှယ်ယာထဲကပုံမှန်ထွက်, ဒါကြောင့် sm ဖြစ်ပါတယ်art သင်တတ်နိုင်သမျှဖမ်းဆုပ်ရန်။ ပေါင် ၆၄၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၇၉၉.၉၉ / ယူရို ၇၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသောကြောင့်ဤပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းသင့်တောင်းထဲထည့်သွင်းပါက ၁၀,၄၀၀ ရမှတ်ကိုအိမ်သို့ယူဆောင်နိုင်ပါသည်။
6 - 75257 ထောင်စုနှစ် Falcon
၏သင်တန်း, ပိုကြီးတဲ့ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon လူတိုင်း၏ဘတ်ဂျက်တွင်မပါဝင်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လူတိုင်း၏အကြိုက်ဆုံးသင်္ဘောကို p အဖြစ်မရရှိနိုင်ဟုမဆိုလိုပါart သင့်ရဲ့များ၏ Lego Star Wars စုဆောင်းမှု။
75257 ထောင်စုနှစ် Falcon ပေါင် ၁၄၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁၅၉.၉၉ / ယူရို ၁၅၉.၉၉ နဲ့ရောင်းချနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့အိမ်အတွက်အချက် ၂,၄၀၀ ကိုယူပြီးပုံမှန်အတိုင်း ၁၂၀၀ ကိုနှစ်ဆတိုးပေးရမယ်။ ဒီမော်ဒယ်ဟာကျော်ကြားလှတဲ့သင်္ဘောရဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး The Rise of Skywalker မှအသေးစားဓာတ်ပုံငါးခုပါရှိပါတယ်။
5 - 75292 Mandalorian Bounty Hunter Transport
သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောအခြားသူများနည်းတူ, သင်နှင့်အတူပြန်ချစ်ကြလျှင် Star Wars Din Djarin နှင့် The Child တို့သည် The Mandolorian ရှိအခက်အခဲများကိုအတူတကွဆုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။
သင်ရရုံသာမက အဆိုပါသင်တုန်းမောက် ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ကလေးသူငယ်ကိုယ်တိုင်၏အလွန်သေးငယ်သောဗားရှင်းအပါအ ၀ င်၊ သေးငယ်သောပုံစံဖြင့်ပြသထားသည့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သောမျက်နှာများကိုအိမ်သို့သင်လည်းယူနိုင်သည်။ Plus အားဖြင့်သင်သည် VIP ရမှတ်နှစ်ဆရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် ၀ ယ်ယူပြီးသည်နှင့် ၁,၉၂၀ မှတ်ကိုသင်၏အကောင့်သို့ထည့်သွင်းလိမ့်မည် 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး.
4 - 75308 R2-D2
Death Star အစီအစဉ်များကိုမမေ့ပါနှင့် - ဤမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းသင့်တောင်းထဲထည့်ပါကဤ Droid လေးသည် VIP အချက် ၂၈၈၀ ကိုအိတ်ထဲထည့်နိုင်သည်။
အဆိုပါမှအသစ်များထို့အပြင် Lego Star Wars မိသားစု, ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသေးစိတ်ပုံစံရဲ့အကြိုက်ဆုံး droid မော်ဒယ်သည်လွဲချော်ရန်အလွန်ကောင်းသည်။ ၃၁ စင်တီမီတာမြင့်သည်။ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 သူ၏ဝါယာကြိုးများနှင့်ခလုတ်များအားလုံးကိုမြင်နိုင်ရန်လုံလောက်သည်။
3 - 75290 Mos Eisley Cantina
အဆိုပါစေသည် ensemble သွန်းချစ်သောသူမည်သူမဆိုသည် Star Wars စကြာဝuniverseာသည်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသည် ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina။ 3,187 piece နှင့် 21 minifigures သည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအသေးစိတ်ကျသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်။ ရက်သတ္တပတ်များစွာအလုပ်ရှုပ်စေသည်။
အိမ်မြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းကြီးမားသောမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းဤတည်ဆောက်မှုနှင့်အတူအချက်အလက်များ ၅,၁၂၀ ယူပါ boost သင်၏ VIP ပိုက်ဆံအိတ်သို့
2 - 75288 ကို AT-AT
Hoth ရှိမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုဖြတ်ပြီးနစ်မြုပ်နေသောဤမိကျောင်းများထက် ပို၍ ထင်ရှားသောမြင်ကွင်းရှိပါသလား။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြသမှုများတွင်ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? အချိန်တန်ပြီ။
ဝယ်ယူစဉ် 2,534 မှတ်အိတ် 75288 ကို AT-AT အခုအချိန်မှာတော့သူကသူပုန်တပ်တွေလိုပဲပြင်းထန်စွာတိုက်ထုတ်နိုင်ပါတယ် Star Warsဖြေ - အင်ပါယာကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်
1 - 75252 Imperial Star Destroyer
အနည်းဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့မဟုတ်ပါart စကြဝuniverseာကိုလွှမ်းမိုးရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များ 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer? ၁ မီတာကျော်သောသင်ကြံ့ခိုင်သောမျက်နှာပြင်စားပွဲတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ဤအထင်ကရမော်ဒယ်မှာကျိုးနပ်ပါသည်။
သငျသညျစိတ်နှစ်ခု၌ရှိနေလျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသငျသညျယိမ်းယိုင်နိုင်ပါတယ်; ဝယ်ယူ 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer အခုသင့်ကို VIP ရမှတ် ၁၀,၄၀၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဆိုမင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ
ပြင်ပ Lego Star Wars, သင်တို့ကိုအီးဆွဲဆောင်နိုင်သောအခြားထိုက်တန်အစုံတစ်တန်လည်းရှိပါတယ်xtra အခု VIP အချက်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးထွက်စစ်ဆေးပါ ဒီမှာ.
← LEGO.com သည်ယနေ့မှရရှိနိုင်သော VIP အချက်နှစ်ဆ
LEGO (၆) ခုသည် VIP အချက်နှစ်ချက်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုရန်သတ်မှတ်ထားသည် →